बेलायतमा अब मास्क लाउन नपर्ने, स्कुल, कार्यालय, बजार सबै खुल्ने
काठमाडौँ । बेलायतमा बुधबार एक लाख आठ हजार मानिसमा कोरोना संक्रमण भयो। त्यही दिन तीन सय ५९ जना संक्रमितले ज्यान गुमाए। संक्रमणको अवस्था यस्तो भएका बेला बेलायती प्रधान मन्त्री बोरिस जोन्सनले भने हाउस अफ कमन्समा एउटा घोषणा गरे। उनले आउने सातादेखि कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न लगाइएका अधिकांश प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने बताए।
त्यहाँ अब स्कुल, कार्यालय, बजार, सार्वजनिक स्थलहरू सबै खुल्ने भएका छन्। बाटोमा हिँड्दा मास्क लगाउनुपर्ने नियम पनि हटाइनेछ। बिबिसीका अनुसार ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमण यसअघि नै उच्च विन्दुमा पुगिसकेको भन्दै बोरिसले जनवरी २७ देखि जनजीवन सामान्य बनाउने बताएका हुन्।
जोन्सनका अनुसार जनवरी २७ देखि सार्वजनिक स्थानहरूमा जाँदा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने नियम हटाइनेछ। विद्यार्थीहरूले कक्षाकोठामा बस्दा मास्क लगाउनुपर्ने नियम त आजैदेखि हटाइएको छ। अब वर्क फ्रम होम निर्देशिका पनि लागू हुने छैन। मानिसहरू कार्यालयमा आएर काम गर्न सक्नेछन्। सार्वजनिक स्थानमा प्रवेशका लागि पूर्ण खोप लगाएको प्रमाणपत्र वा केही समयअघि मात्रै कोरोना नेगेटिभ आएको रिपोर्ट देखाउनुपर्ने नियम पनि हटाइनेछ।
कोरोना भएपछि आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने नियम भने मार्च २४ सम्म लागु हुनेछ। बोरिसले त्यसपछि उक्त नियमको म्याद नथपिने र तथ्यांकहरूले साथ दिए पहिले नै उक्त नियम हट्ने बताएका छन्। बेलायतमा पछिल्लो समय गत डिसेम्बरमा ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमण तीव्र भएपछि यी स्वास्थ्य मापदण्डहरू लागू भएका थिए।
ओमिक्रोन संक्रमणका कारण अस्पतालमा बिरामी चाप नबढेको र संक्रमणको उच्च विन्दु पार भएको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन्। परिस्थिति मूल्यांकन गर्दै सरकारले कोरोनासँगै बाँच्ने दीर्घकालीन नीति ल्याउने उनको भनाइ छ।
प्रधान मन्त्री जोन्सनको यो घोषणा निकै हतारमा पो भयो कि भन्ने पनि चर्चा हुन थालेका छन्। बेलायतमा धेरै मानिसले कोरोनाविरूद्ध खोप लगाएको र संक्रमित पनि धेरै भइसकेकाले जोन्सन सरकारले यस्तो निर्णय लिएको ठानिएको छ।
पछिल्लो समय युरोपमा ओमिक्रोन भेरियन्ट धेरै घातक नभएको र यसको रोकथामका लागि लगाइने प्रतिबन्धहरूले देशको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो असर पर्ने भएकाले प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्नुपर्ने बहस भइरहेको छ। एजेन्सीहरुको सहयोगमा
टेक्ससमा २१ जनालाई गोली हानी मार्नुअघि बन्दुकधारीले के लेखेका थिए ?
युरोप भ्रमणमा रहेका डा. महावीर पुनलाई पोर्चुगलमा सम्मान
टेक्सस हमलामा १९ विद्यार्थी र २ वयस्क मारिए
टेक्ससमा गोली हमलामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ पुग्यो
टेक्ससमा गोली लागेर शिक्षकसहित कम्तीमा १४ बालबालिकाको मृत्यु
कान्स रेड कार्पेटमा देखिएमध्ये १५ उत्कृष्ट पहिरनमा सुरक्षा पन्तको ‘रेड गाउन’पनि
विश्व आइस हक्की सङ्घको बैठकमा नेपाल सहभागी हुने